Nagarik News - 'कसैको गर्लफ्रेन्ड भएर स्टार बन्नु छैन'
हर्षिका श्रेष्ठको परिवारलाई उनी फिल्म क्षेत्रमा जाने कुरा स्वीकार्य थिएन। परिवारले पढाइमा जोड दियो। हर्षिकालाई पनि परिवारको सल्लाहबमोजिम चल्नुथियो। पढाइ गर्दै एउटा निजी कम्पनीमा जागिर खान थालिन्। तर, त्यहाँ फिल्म जोडिन आइपुग्यो। उनी हिरोइन भइछाडिन्। फिल्म एडिटर हुँदै चार वर्षअघि हिरोइनका रूपमा देखिएकी उनले १० वटा फिल्ममा अभिनय गरिन्। चाँडै रिलिज हुन लागेका 'मुखौटा' र 'नागबेली'ले फिल्म करिअर उकास्ने अपेक्षा गरेकी हर्षिकासँग धनबहादुर खड्काको अन्तरंग कुराकानीः
कस्तो लाग्दै छ फिल्म क्षेत्र?
निकै माया गरेको प्रेमीजस्तै। धोका दिइरहन्छ तर पनि माया लागिरहन्छ। यो चार वर्षमा कति मीठा र कति तीता अनुभव गरियो। तर, फिल्म क्षेत्रको मायाका कारण अब यो जीवन यही क्षेत्रमा बिताउने भएकी छु।
तपाईंको 'प्रेमी' फिल्म क्षेत्रले कसरी धोका दियो?
अपेक्षित पारिश्रमिक पाइँदैन। दिने भनिएको पारिश्रमिक पाउन पनि निकै कुर्नुपर्छ। केही फिल्मको पारिश्रमिक लिन बाँकी छ। आफ्नो पारिश्रमिक पनि उठाउन सक्दिनँ। एकदमै कमलो मन छ। 'केही दिनमा दिउँला, अहिले यस्तै पर्योप' भनेर निर्माताले भन्दा 'ठीकै छ' भन्दाभन्दै वर्ष बितिसक्दो रहेछ। तर, हातमा पैसा पर्दैन।
धेरै फिल्मको बाँकी छ कि क्या हो?
अहिलेसम्म गरेका १० वटामध्ये चार वटाको पारिश्रमिक लिन बाँकी नै होला।
कसरी धानिन्छ त हिरोइनको जीवन?
म्युजिक भिडियो र एडले जीवन धान्न सहज बनाइरहेको छ।
यस्तै हो भने यो क्षेत्रमा तपाईंको क्रियाशीलता धेरै वर्ष आशा नगरे हुने भयो?
होइन, म त जीवन यही क्षेत्रमा बिताउनेछु। किनभने, पछिल्लो समय आउनुभएका फिल्मकर्मीहरू असाध्यै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। हालसालै मैले काम गरेका फिल्मले यो क्षेत्रमा भविष्य उज्ज्वल नै छ भन्ने आशा पनि जगाइदिएका छन्।
उमेरले सधैँ हिरोइन भइरहन नदेला नि!
एउटा कलाकारले आफ्नो उमेरअनुसारकै पात्रको भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ। मिथिला शर्मा दिदीले जस्तै म पनि समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्दै लैजानेछु। आजीवन हिरोइन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छैन मेरो।
पहिलो फिल्म रिलिज हुँदा नै तपाईं 'नोटिस्ड' हुनुभएको थियो। तर, अहिलेसम्म अपेक्षित उचाइ हासिल गर्नुभएन।
चाहना त सबैको चाँडै स्टार बन्ने हुन्छ नि, तर त्यो सम्भव छैन। पहिलो फिल्म इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङसँग 'अँगालो यो मायाको' गरेपछि मलाई निकै आश थियो। त्यसले मलाई फिल्म क्षेत्रमा स्थापित गराइदियो। मलाई स्टार हुन हतार थिएन र छैन पनि। यही गतिमा मात्रै अघि बढिरहेँ भने पनि एकदिन तपाईंले भनेजस्तो उचाइमा म हुनेछु।
प्रोड्युसर/डाइरेक्टरसँग हिमचिम बढाउँदा चाँडो माथि पुगिन्छ भनिन्छ। हो?
यस्ता कुरामा विश्वास गर्दिनँ। काम गर्ने क्षमता भएन भने हिमचिमले माथि पुर्यारउँदैन, झन् तल झार्छ। आफ्नै क्षमताका आधारमा प्राप्त सफलताको स्वाद असाध्यै मीठो हुन्छ। त्यो आउने सम्भावना पनि देखिनथालेका छन्।
खराब नियत राखेर कसैले तपाईंलाई फिल्मको अफर गरे?
धेरैले गरेका छन्। तर, मलाई कसैको गर्लफ्रेन्ड भएर स्टार हिरोइन हुनु छैन।
फिल्ममा साइन गर्नुअघि सोझो देखिएर बिस्तारै सम्बन्ध बढाउँदै त्यो नियत देखाउनेहरू पनि भेटिए होलान् नि?
म पो कहाँ १६/१७ वर्षकी केटी हो र, उनीहरूले देखाउने सपनाका जालमा परिहाल्ने? केहीको त्यस्तो नियत सामना गरेकी छु। तर, उसको क्षमताले नधान्ने घुर्की लगाइदिएपछि आफैँ साइड लागिहाल्यो नि।
अचेल तपाईंका प्रेम, ब्रेकअप र त्यस्तै सम्बन्धबारे हल्ला चल्न थालेका छन्। खास कुरा के हो?
सायद म चर्चित हुँदै छु। मेरो फिल्म करिअरलाई एकछिन बिर्सिने हो भने म जवान युवती पनि हुँ। त्यसैले मन पर्ने /पराउने यसअघि पनि भए होलान्, यसपछि पनि हुनेछन्। तर, अहिले मेरो निजी जीवनमा अलि बढी चियोचर्चो हुन थालेको छ। भएको कुरा बढाइचढाइ भएर आउँदा दुःख त लाग्छ, तर सबैका आँखामा पर्न थालेकोमा खुशी पनि लाग्छ।
तपाईंको ब्रेकअपको हल्ला चर्कै चल्यो क्यारे। त्यो हल्लाले तपाईंलाई कस्तो प्रभाव पार्यो,?
ब्रेकअप भएको सत्य थियो। म त्यसको पीडा भुल्न खोज्दै थिएँ, त्यही कुरालाई लिएर मिडियाकर्मीले प्रश्न गरिरहँदा 'हर्ट' भइँदो रहेछ। पहिलोपल्ट आफ्नो 'नर्मल लाइफ' खोसिएको महसुस गरेँ। अब मैले निजी जीवनका मामलामा पनि अभिनय गर्न जान्नुपर्छ, सत्य भित्र दबाउनुपर्छ र समयानुकूल हुने कुरा बाहिर देखाउनुपर्छ भन्ने यो हल्लाबाट सिकेँ।
भनेपछि नयाँ प्रेमसम्बन्ध चाहिँ अति गोप्य राख्ने?
यस क्षेत्रकाहरूसँग चक्कर चलाइँदैन। यो क्षेत्र बाहिरको भयो भने यसै पनि गोप्य हुन्छ।
फिल्म बाहिरका तपाईंका योग्यका लागि भ्याकेन्सी खुला गर्नुभएको हो कि क्यो हो?
फिल्म क्षेत्र बाहिरका केटाहरू मन परे पनि हामीलाई प्रस्ताव गर्न डराउने रहेछन्। यसले घर चलाएर नबस्ली, लाइफ स्टाइल अर्कै होला भन्ने सन्देह हुँदो रहेछ। मलाई मन पराउने र मलाई पनि मन पर्ने योग्यता भएको नजिकियोस् मात्र, मन परेपछि म आफैँ प्रपोज गर्छु ।
हिरोइन सानैदेखिको रहर हो?
थिएन। तर, फिल्मप्रतिको रुचि चाहिँ आमाले जगाइदिनुभएको थियो। १२ वर्षको हुँदा आमा बित्नुभएकाले साथ पाइनँ। तर, आमा फिल्म भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो। हेटौँडामा हुँदा आमाले मलाई लिएर वीरगञ्ज फिल्म हेर्न जानुभएको धमिलो सम्झना छ।
कसरी आइपुग्नुभयो त यो क्षेत्रमा?
कनेक्सन कहीँ न कहीँबाट हुने रहेछ। धरानमा रहँदाबस्दा फेसन डिजाइनर उत्तम बनेपाली दाइले बेलाबेला र्यानम्पमा उतार्नुहुन्थ्यो। तर, फिल्म खेल्ने कुनै रुचि थिएन। बुवाले पनि मलाई यो क्षेत्रमा आएको रुचाउनुहुन्नथ्यो। यसकारण म कलेज पढ्नका लागि काठमाडौँ आएँ। पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएँ। एउटा अफिसमा रिसेप्सनिस्ट भएर काम गरेँ। संयोगले त्यो फिल्म एडिटिङ हुने ठाउँ परेछ। मैले पनि फिल्म एडिटिङ सिकेर एडिटिङ थालेँ। पाँचवटा जति फिल्म एडिटिङ गरेकी छु।
हिरोइनको अफर चाहिँ कसरी आयो?
मैले फिल्म एडिटिङ गर्दैगर्दा केही फिल्मकर्मीले 'तपाईं प्राविधिक होइन, आर्टिस्ट हुनुपर्ने मान्छे हो' भन्थे। एडिट गर्दैगर्दा आर्टिस्टले गरेको अभिनय देखेर यो भन्दा त मै गतिलो गर्थें जस्तो पनि लाग्थ्यो। फिल्म 'समय'को एडिटिङ गर्दै गर्दा विनोद सेरेङ दाइले 'एउटा राम्रो प्रोजेक्ट छ, हिरोइन भएर काम गर्छाै?' भन्नुभयो। सिक्किमका निर्माताले बनाउने, इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङले अभिनय गर्ने र पारिश्रमिक पनि राम्रै प्राप्त हुने भएपछि अफर स्वीकार गरेँ।
फिल्मको पारिश्रमिक रोकिँदा, अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुँदा त्यही पेशा ठीक थियो जस्तो लाग्दैन?
कलाकारका जीवनका आरोह–अवरोह देखेर कहिलेकाहीँ त्यही पेशा राम्रो थियो जस्तो लाग्छ। तर, त्यहाँ पूरै सन्तुष्ट भएको भए म यहाँ पनि हुन्थिनँ भनेर चित्त बुझाउँछु।
बीचमा तपाईंले क्वालिटीभन्दा पनि क्वान्टिटी बढाउने फिल्ममात्रै गर्नुभयो, है?
त्यो बाध्यता हो। फिल्म क्षेत्रमा जम्ने हो भने निरन्तर भइरहनुपर्छ। राम्रो मात्रै गर्छु भनेर ग्याप गर्न थालियो भने कसैले पनि सम्भि्कँदैनन्। त्यसैले मैले आफूलाई सिनमा राख्न पनि त्यस्ता फिल्म गरेँ। बाटोमा हिँडिरह्यो भने मात्रै गन्तव्य पुगिन्छ भनेर यात्रुले बस नकुरेजस्तै हो। बसबाट चाँडो त पुगिन्छ तर त्यो दिन बस नआइदियो भने के हुन्छ? त्यसैले सबै शुक्रवारले हिरोइनको भाग्य चम्काउँदैनन्, नियमित भइराख्यो भने मेरा लागि पनि एउटा शुक्रवार लक्की डे भएर आइहाल्छ नि।
फिल्म 'मुखौटा' रिलिज हुने शुक्रवार तपाईंका लागि कत्तिको लक्की सावित हुन सक्छ?
राम्रो गर्न खोज्ने टिमको एउटा सदस्य भएकी छु म। फिल्मबाट निकै आशा गरेकी छु।
अभिनेत्री हेमा श्रेष्ठबारे बजारमा अहिले के सुनिन्छ भने उनी स्टन्टमा कुनै हिरोभन्दा कम छैनन्। म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्दै आएका मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको 'हँसिया' मा अभिनय गरेकी हेमाले उक्त फिल्ममा...